बाँदर लड्ने भीरमा आकर्षक खेलमैदान ! « Drishti News – Nepalese News Portal
बाँदर लड्ने भीरमा आकर्षक खेलमैदान !
२ माघ २०७७, शुक्रबार 9:35 am
सिन्धुपाल्चोक, २ माघ । भीर पाखाका बीचमा ४५ मिटर चौडाइ र ८५ देखि १०० मिटरसम्म लम्बाइको खेलमैदान निर्माणको कल्पना गर्नु नै असम्भव लाग्छ । तर ‘आँट गरे के पुग्दैन र ?’ भन्ने नेपाली भनाइलाई चरितार्थ गर्दै यहाँ यो काम सम्पन्न भएको छ । बाह्रबिसे नगरपालिका–४ ठूलो पलाँतीमा आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ देखि जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागको आर्थिक सहयोगमा खेलमैदान निर्माण शुरु भएको थियो । खेलमैदान निर्माणका लागि तत्कालीन सांसद एवं पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पहल गरेका हुन् ।
चिलाउने र अँगेरीका बुट्यानले ढाकेको बाँदरसमेत लड्ने भीरका नामले चिनिने स्थानमा खेल मैदान निर्माण गरी पुस २२ देखि २८ गतेसम्म जिल्लाव्यापी फुटबल प्रतियोगितासमेत सम्पन्न भएको छ । अँगेर पाखा सामुदायिक वनको भीर पाखा खारेर करिब १० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पर्खाल निर्माण गर्न करिब रु १० करोड नै खर्च भएको छ । विभागले रु सात करोड, पूर्व मन्त्री बस्नेतले आर्थिक वर्ष २०७३र२०७४ मा सांसद पूर्वाधार विकास कोषबाट, स्थानीयवासी एवं सङ्घ संस्थाको समेत सहयोग जुटाएर खेल मैदान निर्माण गरिएको हो ।
खेलमैदानसँगै ठूला र सानाका लागि छुट्टाछुट्टै पौडी पोखरी, कभर्ड हल, स्वास्थ्य चौकी र हेलिप्याडसमेत निर्माण भइसकेको छ । बाह्रबिसे, लामोसाँघु बजार, सुनकोशी र भोटेकोशीलगायत नदी एवं वरिपरिका आकर्षक डाँडाका साथै हिमाली शृङ्खला देखिने खेलमैदान नजिकै भ्यू टावर दृश्यावलोकन स्तम्भसमेत निर्माण गरिने योजना छ । योसँगै ठूलो पलाँतीको यो खेलमैदान जिल्लामै आकर्षक खेल पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास हुने भएको छ ।
खेलमैदान निर्माणमा अहोरात्र खटिनुभएका स्थानीयवासी जनार्दन बस्नेत फुटबल, भलिबल खेल्दा गर्मी भए खेलाडीलाई पौडी खेल्न पोखरी निर्माण गरिएको, स्वास्थ्यमा समस्या आए उपचारका लागि स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरिएको बताउँछन् । ठूलाका लागि पाँच फिट उचाइ र सानाका लागि तीन फिट उचाइको पौडी पोखरी तयार भएको छ । पौडी पोखरीका लागि चार किमी माथिबाट खानेपानी झारिएको छ । झारिएको खानेपानी जम्मा गर्न एक लाख २२ हजार लिटर क्षमताको ट्याङ्कीसमेत निर्माण गरिएको छ । यसबाट पौडी पोखरीमा बेलाबेलामा पानी फेर्न सहज हुन्छ ।
स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा बस्ने स्थानीयवासी पूर्वमन्त्री बस्नेतका भाइ प्रकाश बस्नेतले सहयोग गरेका छन् । स्वास्थ्यचौकीका लागि एक जना स्वास्थ्य सहायक, कार्यालय सहयोगी, एवं निःशुल्क वितरण गर्ने औषधिसमेत सहयोगस्वरूप अमेरिकाको लायन्स क्लबबाट आउने गरेको छ । जिल्लामा खेलकुद एवं खेलाडीको विकास गर्ने उद्देश्यले यो खेलमैदान निर्माण गरिएको हो । निर्माण सम्पन्न भएपछि पहिलोपटक जिल्लाव्यापी फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ । प्रतियोगितमा जिल्लावासीले मात्र भाग लिन पाउने नियम बनाइएको थियो । “जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये नौ वटाले भाग लिएको प्रतियोगितका खेलाडीको नागरिकता हेरेर सहभागी गराइयो, जिल्लामा खेलको विकास होस् भन्ने उद्देश्यले जिल्लाका खेलाडी समावेश गरिएको हो, जिल्लाव्यापी अन्तरपालिका स्तरीय खेल गरिएको हो”, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय खेलकुद विभागका प्रमुखसमेत रहनुभएका पूर्वमन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो ।
खेलमैदान निर्माणसँगै वडा कार्यालयसँगको सहकार्यमा सानासाना बालबालिकालाई खेल प्रशिक्षण दिइने भएको छ । प्रशिक्षणका लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले एक जना प्रशिक्षक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कजविक्रम नेम्वाङ यस्ता खेलमैदानलाई उपयोग गरेर नियमितरूपमा खेल प्रशिक्षण गर्न सहयोग गरिने बताउँछन् । वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ खेलमैदानले स्थानीय युवालाई खेल अभ्यास गर्न सहज भएको बताउँछन् । बालबालिका एवं युवावर्गलाई खेल प्रशिक्षण दिन वडाका तर्फबाट सक्दो सहयोग आज भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदै, मूल समारोह कुमारी मन्दिरमा गरिने उनको प्रतिबद्धता छ । रासस